Manuel de procédures, Direction Générale des Impôts
Ireo dingana tokony harahina amin'ny fandoavana ny petra-bola miavaka amin'ny e-Hetra
Araka ny fepetra voalaza ao amin'ny fampahalalam-baovao avy amin'ny Direktorat Jeneralin'ny hetra tamin'ny 12 Mey 2021, taorian'ny fanisana ny tombana amin'ny hetra miditra (IR), ho an'ny toe-javatra:
- mpampindram-bola: ny fandoavana ny petra-bola miavaka dia tsy voatery avy amin'ny fe-potoana 21 Mey 2021. Na izany aza, ny fametrahana farany ny fanambarana IR dia tsy maintsy atao amin'ny 15 Jona 2021 farafaharatsiny;
- tsy fahampiana: ny fandoavana ny fanangonam-bola faran'izay kely indrindra ary koa ny fametrahana ny fanambarana IR dia tokony hatao aorian'ny 15 Jona 2021;
- mampiseho vola aloa:
ireo izay afaka manao ny fisoratana farany amin'ny IR amin'ny 21 Mey 2021, dia tsy tokony hampiasa ilay petra-bola miavaka izy ireo ary afaka miroso toy izao:
na mandoa ny IR tokony ho feno;
na mandoa ny antsasaky ny IR noho ny fe-potoana 21 May 2021 ary ny antsasany kosa alohan'ny 15 Jona 2021;
ireo izay tsy afaka manao ny fisoratana farany amin'ny IR amin'ny fe-potoana 21 May 2021:
izy ireo dia tsy maintsy mandoa petra-bola miavaka mifanaraka amin'ny antsasaky ny vinavina IR amin'ny fe-potoana 21 May 2021;
izy ireo dia tsy maintsy manefa ny vola fampirimana farany an'ny IR faramparan'ny 15 Jona 2021 ary mandoa ny ambiny aorian'ny fandinihana ny petra-bola miavaka. hahalala bebe kokoa
Fomba fampiasana ny HetraOnline
Entina hanaovana ny filazana sy ny fandoavan-ketra amin'ny alalan'ny famindram-bola amin'ny Banky ... Tohiny
Torolalana amin'ny fampiasan ny "eHetra payment"
Ny fiasa amin'ny kaonty banky dia ahafahanao misoratra anarana sy mitantana ny kaonty bankin'ny orinasa afaka ampiasaina ho an'ny fifanakalozana fandoavana hetra amin'ny Internet.
Ity misy torolàlana momba ny mpampiasa momba ny eHetra Payment, torolàlana ho an'ny mpizahatany hanamora ny fandoavanao amin'ny Internet.
Torolalana amin'ny famenoana ireo tovana ISI amin'ny excel.
Ireo tovana alefa ao amin'ny HetraOnline dia efa voavolavola amin'ny excel araka ity manaraka ity.
Ny fomba fandefasana ireo tovana ISI
Fitaovana natao hanamaivana ny fandefasana ireo tovana ISI ataon'ny mpandoa hetra. Manatsotra sy tsy manatara satria azo atao n'aiza n'aiza toerana misy aterineto. Tohiny
Ny Fomba famenoana ny tabilao excel ho an'ny tovana IRSA
Aleo mba Miscrosoft Excel 2007 no ampiasaina hamenoana ireo tovana ho alefa. Torolalana
Torolalana amin'ny fandefasana ireo tovana IRSA
Fitaovana natao hanamaivana ny mpandoa hetra amin'ny fandefasana ireo tovana ary koa manampy ny asa ny hetraonline. Vakio ny torolalana
Ny Fomba fanangonan-kevitra taona 2017
Ny fanarahana ity torolalana amin’ny fomba fiasa ity dia natao hitondra fampitoviana eo amin’ny fantanterahana ireo asa eo anivon’ny Ivon-ketra manerana ny nosy ; mikasika ireo filazalazana tsy maintsy atao, ny fomba fikajiana hetra, ny fampidiran-ketra ary ireo asa fanamarihana izay tsy maintsy atrehan’ny foibe fitantanana.
Ho an'ireo ivon-ketra
Ny fomba fanangonan-ketra, ny fanaraha-maso isan-tsokajiny, ny fifanolanana samihafa ary ireo toro-hevitra momba ny sazy, ny fe-potoana fandoavan-ketra sns.
Taona 2007 [Vakio]